March 4, 2020 - Myitter
March 4, 2020 Myitter 0
လှိုင်သာယာ၊ မတ်လ (၄) – ရန်ကုန် လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင် စက်ရုံ ဆယ်ရုံကျော် ပိတ်သိမ်း လိုက်ပြီး ဒီလထဲတွင် နောက်ထပ် စက်ရုံ ၅၀ ခန့်က ပိတ်သိမ်းမည်ဟု ကြားသိရကြောင်း အလုပ်သမားအရေး ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် ILO အဖွဲ့မှ ဦးဌေးလွင်က ပြောကြားသည်။ “လှိုင်သာယာမြို့၊ စက်မှုဇုံ […]
“အမေ လိပ်စာမှားပီးဝင်မိတာပါ သားရယ် တဲ့”
” အေမ ” တစ်ချိန်တုန်းက မြို့လေးတစ်မြို့မှာမျက်လုံးတစ်ဖက် ကွယ်နေသော မိခင်တစ်ဦးဟာသားငယ်လေးတစ်ယောက်နဲ့ တူနေထိုင်လျှက် ရှိပါတယ်။ မိခင်ဟာ မျက်လုံးတစ်ဖက် ကွယ်နေသော်လည်းသားငယ်လေးရဲ့ရှေ့အရေးကို ပူပန်လျှက် ရသမျှအလုပ်ကို လုပ်ပြီး၊ တစ်ခါတစ်ရံတောင်းရမ်းကာရရှိလာသောငွေဖြင့် သားငယ်လေးကို ပြုစုပျိုးထောင်ပေးရှာပါတယ်။ သားငယ်လေးသည် ပညာစုံလို့ အချိန်တန်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါ . . . “တစ်ဖက်လှပ်ရဲ့သား၊ […]
ငွေကြေးဝင်လာမစဲ တသဲသဲ ရွှေဝင်ငွေဝင် ယတြာ အစီအရင် ….
ငွေကြေးဝင်လာမစဲ တသဲသဲ ရွှေဝင်ငွေဝင် ယတြာ အင်မတန်ရိုးရှင်ပြီးလွယ်ကူသည်။ ပိုက်ဆံ တစ်ရွက်ပေါ်တွင် အောင်သပြေ(၃)ခက် ကို ဖန်ခွက်ထဲတွင်ရေထည့်ပြီး ဧည့်ခန်းတွင်တင်ထားပါ။ ( ၁ကျပ်မှအစ ၁၀၀၀၀)အထိ မည်သည့် ငွေစက္ကူမဆို အသုံးပြုနိုင်သည်။ တင်တဲ့အချိန်တွင် အသံထွက်၍ ရွတ်ဆိုရန် လာ လာ ငွေဟေ့ ငွေဟေ့ လာ […]
သာသနာ့ဂုဏ်ကို ဆောင်ခဲ့တဲ့ ဘွဲ့၁၃ဘွဲ့ရ ဆရာလေးပါတဲ့ ….
ညောင်ဦးမြို့နယ် ချောင်းရှည်ရွာဇာတိဖွား …ပုသိမ်ကြီး ချမ်းမြရံသီ သီလရှင်စာသင်တိုက်ကြီးက (၁၃)ဘွဲ့ရ မဓမ္မစာရီသုဘဒ္ဒါလင်္ကာရတဲ့ …..တော်ချက် ချီးကျူးဂုဏ်ပြုရ.. သာသနာအတွက် စာချဆရာတစ်ပါးပေါ်ထွက်လာလို့ ဝမ်းသာရ… သီလရှင်လေးတွေ လည်း အားကျလေးစား ကြိုးစားလိုက်ကြပါနော် ညောင်ဦးမြို့နယ် ချောင်းရှည်ရွာဇာတိဖွား …ပုသိမ်ကြီး ချမ်းမြရံသီ သီလရှင်စာသင်တိုက်ကြီးက (၁၃)ဘွဲ့ရ မဓမ္မစာရီသုဘဒ္ဒါလင်္ကာရတဲ့ …..တော်ချက် ချီးကျူးဂုဏ်ပြုရ.. […]
ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာ တရုတ်နိုင်ငံသားအချင်းချင်း လူသတ်အလောင်းဖျောက်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းက ဒီလို ဆိုပါလား…
ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာ တရုတ်နိုင်ငံသားအချင်းချင်း လူသတ်အလောင်းဖျောက်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းက ဒီလို ဆိုပါလား….။ ဖြစ်စဉ်တည်နေရာက ထိုင်းနိုင်ငံ ပတ္တရားမြို့…။ ဖြစ်ပုံက…ဒီလိုတဲ့ဗျ…။ လူသတ်မှုရဲ့ အဓိကတရားခံက အွန်လိုင်းလောင်းကစား ထိုးသားပေါ့.. အသတ်ခံရတဲ့သူက အွန်လိုင်းလောင်းကစားဒိုင်။ နယ်စပ်ကာဆီနိုရုံများမှာလဲ အစုရှယ်ရာဝင်ဆိုဘဲ။ သတ်တဲ့ တရုတ်က လမ်းဘေးကလူတွေတာ့မဟုတ်ဘူး ဆောက်လုပ်ရေးကန်ထရိုက်တဲ့… အွန်လိုင်းလောင်းကစားလုပ်ရင်း အနိုင်းမရ ကစားတိုင်းရှုံးလာတာ […]
မော်လူးတွင် ၅ အဆင့်ရှိ ငလျင်လှုပ်ခတ်မှုကြောင့် သာသနိက အဆောက်ဦး အချို့ပျက်စီး
မုံရွာဂေဇက် မုံရွာ၊မတ်-၄ ကသာခရိုင် အင်းတော်မြို့နယ် မော်လူးဒေသတွင် ယနေ့ နံနက် ၆ နာရီ ၄၀ မိနစ် ငလှုပ်ခတ်ခဲ့သော ငလျင်ကြောင့် သာသနိက အဆောက်အဦအချို့ ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်း မြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန မှ သတင်းရရှိသည်။ မော်လူးဒေသ ဖုန်ကုန်းတောင်ရှိ ရန်အောင်မြင် မဂ်လာကျောင်း မြောက်ဘက်မုဒ်ဦးပြိုကျခြင်း၊ […]
ဂရုစိုက်တဲ့လူကို မင်းပစ်ပယ်တဲ့အခါ …. ဥပေက္ခာပြုတဲ့သူနဲ့ မင်းမုချ တွေ့ရလိမ့်မယ်
ဝဋ်လည်ခြင်း ဆုလာဒ်… ဂရုစိုက်တဲ့လူကို မင်းပစ်ပယ်တဲ့အခါ…… ဥပေက္ခာပြုတဲ့သူနဲ့ မင်း တွေ့ရလိမ့်မယ် ။ သည်းခံပေးမှန်း မင်းသိရက်နဲ့ အနိုင်ယူတဲ့အခါ …… သည်းမခံနိုင်တဲ့သူက မင်းကို ပြန်စော်ကားလိမ့်မယ် ။ သဝန်တိုတတ်သူကို မင်းမျက်ကွယ်ပြုမိတဲ့အခါ …… သဝန်မတိုတတ်သူက မင်းကို လက်ပိုက်ကြည့်နေလိမ့်မယ် ။ နားလည်ပေးနိုင်သူကို မင်းစိတ်ပျက်အောင် […]
ဟင်းမကောင်းဘူးဆိုကာ ဆွမ်းမလောင်းပဲ မနေပါနဲ့ ….
ဟင်းမကောင်းလည်း ဆွမ်းလောင်းပေးပါ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ရှေးပဝေသဏီထဲက နေ ဒီနေ့ချိန်ထိ မပျောက်ကွယ်ပဲ တည်တံ့နေတဲ့အရာဟာ နံနက်မိုးလင်းပြီးဆိုတာနဲ့ ရဟန်းသံဃာများ ဆွမ်းအလှူခံကြွ နေခြင်း ဆွမ်းထချက် ပြီး နေ့စဉ် နေ့တိုင်းဆွမ်း လောင်းလှူတဲ့ “ပိဏ္ဍပါတ-ဒါနအလှူ ” (သပိတ်ထဲသို့ ထည့်၍ ဆွမ်းလှူခြင်း) ဝတ်ကို နေ့စဉ် “အာစိဏ္ဏကံ”အမြဲမပြတ် […]
အမေရိကန်မှာ တော်နေးဒိုးမုန်တိုင်းကြောင့် သေဆုံးသူ ၂၅ ဦးအထိရှိလာ ….
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ တင်နက်ဆီပြည်နယ်အလယ်ပိုင်းမှာ ဖေဖော်ဝါရီ ၃ ရက်နေ့က တော်နေးဒိုးမုန်တိုင်းနှစ်ခု တိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့် သေဆုံးသူ အရေအတွက်ဟာ ဒီနေ့မနက်က ၂၅ ဦးအထိ မြင့်တက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဝီလျံလီက ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ပြည်နယ်ရဲ့ အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ နတ်ရ်ှဗီးလ်မြို့ကတော့ မုန်တိုင်းကြောင့် ထိခိုက်မှုအများဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီး အိမ်ခြေတွေနဲ့ အခြားအဆောက်အအုံတွေ တော်တော်များများ ပျက်စီးသွားခဲ့ရပါတယ်။ […]
Covid 19ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် အကယ်ဒမီပေးပွဲကို ရက်ရွှေ့ဆိုင်း …
Breaking_News Covid 19ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် အကယ်ဒမီပေးပွဲကို ရက်ရွှေ့ဆိုင်း မတ်လ ၂၉ ရက်တွင် ပြည်သူ့ရင်ပြင်၌ ပြုလုပ်မည့်အကယ်ဒမီပေးပွဲကို လတ်တလော နိုင်ငံအနှံဖြစ်ပွားနေသော Covid 19 ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ရက်ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ကြောင်း ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးဥက္ကဌ ဦးညီညီထွန်းလွင်ကပြောကြားခဲ့သည်။ နှစ်တိုင်းတွင် အဆိုပါ အကယ်ဒမီပေးပွဲသို့တတ်ရောက်သည့်လူဦးရေမှာ နှစ်စဉ် လူဦးရေ သုံးထောင်ခန့်ရှိပြီးအကယ်ဒမီပေးပွဲကိုသင်္ကြန်အပြီး မိုးဦးမကျခင် […]